Willpower - ahoana ny fampivoarana sy fanamafisana?
Ny tsirairay dia manonofy amin'ny fampivelarana ny sitrapony, satria takatry ny olona fa mamaritra ny fiainana amin'ny hoavy amin'ny lafiny maro: fifandraisana amin'ny havana, ny fahombiazan'ny sehatra matihanina, ny fandrosoana ara-bola ary ny fahasalamana. Misy fomba maro izay hanampy ireo te-hahafantatra ny fomba hampivelarana sy hanamafisana ny sitrapony.
Nahoana no mila manam-pahefana ny olombelona?
Ny teny hoe Willpower dia azo lazaina ho fahaizana mitantana ny ezaka atao amin'ny fanatanterahana ny vokatra ilaina mifanohitra amin'ny fanirian'ny tena manokana. Ny olona matanjaka ara-panahy manana ezaka lehibe dia tsy misy fiantraikany avy any ivelany. Izy dia voakasik'ireo fahazaran-dratsy toy ny fisotroan-toaka, ny fifohana sigara, ny fidorohana zava-mahadomelina ary ny fiankinan-doha amin'ny lalao ordinatera. Misy ny fiheverana fa hanana fahefana - izany no toetra, ary ny toetra dia tsy maintsy sasatra. Mba hahatonga azy ho modely, ny fanajana ny fanajana sy ny fankasitrahana, ary ny hahombiazany eo amin'ny fiainana, dia matetika ianao no tokony "hitsoka ny tendanao amin'ny hiranao."
Willpower dia ny fihetsiky ny olona iray amin'ny fifandirana anaty ary ny fomba fihetsiny amin'ny fikosehana tampoka na faniriana tampoka ary miankina amin'ny fifehezan-tena. Ny fandinihana vao haingana teo amin'ny sehatry ny atidoha dia mampiseho fa ny matavy dia afaka mamaly ny traikefa rehetra nahazo, ary miankina amin'izany, afaka miova izany, ary azo lazaina ho "voatahiry". Izany hoe, ny olona mamaky bebe kokoa, ny mamaky mora kokoa azy dia lasa, ary raha manilikilika tsy tapaka ianao dia afaka manatsara kokoa ny fandrindrana ny hetsika . Ny fifehezan-tena dia tsy fiheveran-tena amin'ny fitsipika ary manomboka mampiofana ny tenanao, azonao atao ny mahatratra ny haavo mahatalanjona amin'ity raharaha ity.
Ahoana no hampivoarana sy hanamafisana orina ny saina?
Mianara ny fahalemenao . Azonao atao ny manolotra ohatra iray momba ny toaka iray izay tsy mahatakatra fa marary izy. Na dia tsy fantany aza fa miankina aminy izy, dia tsy ho afaka hamongotra izany izy. Ny fahatsiarovan-tena amin'ny zavatra manosika olona iray hilefitra, dia fanohanana ary manampy amin'ny fandikana ny "fandrika" izay ahafahan'ny ezaka hery hametrahana ny toerany.
Ataovy izay tianao indrindra . Ny hakamoana sy ny fahalemen'ny tenany no manakana ny olona tsy hiasa amin'ny asa sasany. Ilaina ny manome azy io amin'ny ady, mba hanakanana ny faharetana. Tsy voarara ny handrisika ny tenanao, ohatra, te hanala lanja, fa tsy te hiditra amin'ny fanatanjahan-tena, afaka mandresy lahatra ny tenanao ianao, mandrisika amin'ny fomba mahafinaritra amin'ny endrika vaovao dia haka akanjo, sns.
Fiantohana sy tsy fivadihana . Ny mavesa-danja tsara dia mety hivoatra raha tsy misy ny fepetra tsy maintsy hitranga sy maharitra. Hadalana ny fandaminana ny fampiofanana iray andro ary manantena ny ho very ao anatin'ny indray andro. Tsy mila mandrisika ny tenanao fotsiny ianao, fa mila midera ny faharetana, ary miangavy sy mampifaly azy koa. Tena manan-danja tokoa ny fifehezan-tena amin'ny fampiofanana ny sitrapo.
Self-expression . Tsy dia ilaina loatra ny mianatra ny fomba fitsaboana mety, hanombohana fisaintsainana na fanamafisam-peo . Amin'ity farany ity, tokony hilaza zavatra toy izao ianao: "Misafidy fomba fisainana vaovao ho an'ny tenako aho. Azoko atao, hahomby aho, satria mendrika ny ho tsara tarehy, mahomby, manan-karena, "sns.
Faniriana mafy ny ho lasa tsara kokoa . Ny lehilahy dia mamorona ny fahazazany sy ny olany ary manome fahafaham-po ny filany manokana. Saingy raha mahita fomba tsara sy mahafa-po izy mba hanomezana fahafaham-po ireo zavatra ireo, dia voavaha ilay olana.
Aza mandray fanapahan-kevitra haingana . Azonao atao ny manome fotoana ahafahana mieritreritra, manaova tsoa-kevitra. Ny fomba tsara indrindra hiatrehana ny adin-tsaina dia fanelingelenana, ary amin'ny fampitomboana ny sitraponao, afaka manao toy izany ianao, raha tsy izany dia mety ho reraka.
Izany no fomba ahafahanao ho lasa matanjaka kokoa, ambony kokoa, be herimpo kokoa, saingy zava-dehibe ny tsy manitatra loatra ary tsy manantena ny tsy hitranga, satria ny olon-drehetra dia manan-jo hanana fahalemena madinika.
Ahoana no mahatonga ny ranomaso?
Inona no tokony hatao any amin'ny hopitaly?
Toe-tsaina mampiady saina
Arthritis rheumatoid - soritr'aretina, fitsaboana amin'ny fitsaboana amin'ny olona
Mpanafaka rivotra ho an'ny trano
Vehivavy-Libra - mifanaraka amin'ny famantarana hafa
Dior 2014 Punkte
Inona no hitranga any Prague mandritra ny 1 andro?
Banitza miaraka amin'ny alika an-trano
Karazam-bolo natao ho an'ny fanadiovana vatana - tsiambaratelo ny fangatahana
Ny fahasamihafana eo amin'ny neuralgia - ny soritr'aretina sy ny fitsaboana
Nanohy ny fomban-drazana tao amin'ny orinasa fanorenana ny zanak'i Cindy Crawford
Ahoana ny fomba fitazonana diary?
Ny fialan-tsiny amin'ny lalao ordinatera